ISouthwest Airlines: Sizokwenqaba ukuvinjelwa kweTexas ngegunya lokugoma
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » ISouthwest Airlines: Sizokwenqaba ukuvinjelwa kweTexas ngegunya lokugoma
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Human Rights • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
Isikhulu esiphezulu seNingizimu-ntshonalanga: Sizokwenqaba ukuvinjelwa kweTexas egunyeni lokugoma
UGary Kelly: “Sinxusa bonke abasebenzi bethu ukuthi bagonywe. Uma bengakwazi, sibanxusa ukuba bafune indawo yokuhlala, kungaba ngenxa yezokwelapha noma yezenkolo. ”
Igunya lokugoma iSouthwest Airlines COVID-19 lalinokuxhumeka “okungu-zero” ekucinyweni kwendiza ngempelasonto.
Inhloso yegunya lokugoma leSouthwest Airlines ukwenza ngcono ezempilo nokuphepha, hhayi ukuthi abantu balahlekelwe yimisebenzi.
ISouthwest Airlines izinze eDallas, eTexas futhi ingabhekana nempendulo enzima ngokudelela umyalelo ophethe wombuso.
Isikhulu esiphezulu seSouthwest Airlines uGary Kelly, namhlanje, uthembise ukuthi uzokwenqaba ukuvinjelwa kweTexas ngegunya lokugoma i-COVID-19.
Umyalo omusha we-Texas Governor Greg Abbott uvimbela izinkampani ezizimele ukuthi zidinge ukugonywa kwe-COVID-19 kubasebenzi.
Ngesikhathi kuxoxwa ngoLwesibili, uKelly ukugcizelele lokho I-Southwest Airlines Igunya le-COVID-19 lokugoma belinokuxhumeka “okungu-zero” ezinkulungwaneni zokukhanselwa kwendiza ngempelasonto kanye nokumangalelwa kwenyunyana ngokumelene nenkampani, nokuthi inkampani yezindiza "ayinankinga" nabasebenzi bayo.
“Sinxusa bonke abasebenzi bethu ukuthi bagonywe. Uma bengakwazi, sibanxusa ukuba bafune indawo yokuhlala, kungaba ngenxa yezokwelapha noma yezenkolo, kodwa inhloso yami kusobala ukuthi akekho ophelelwa ngumsebenzi, ”kusho uKelly, echaza ukuthi inhloso yegunya lokugoma iSouthwest Airlines igunya "Ukuthuthukisa impilo nokuphepha, hhayi ukuthi abantu balahlekelwe yimisebenzi."
“Yebo, sinemibono eqinile ngalesi sihloko, kodwa lokho bekungeyona inkinga obekukhona ngayo I-Southwest Airlines ngempelasonto, ”kuqhubeka yena, ebhekisa ekucinyweni kwendiza nokubambezeleka. Esikhundleni salokho, i-CEO ibonakala iphindwe kabili ngokusola abasebenzi abalawula ukulawulwa komoya kanye nesimo sezulu eFlorida, futhi ngokungacacisi babiza "ukungasebenzi" njengenye yezinkinga abaziqaphelayo.
UKelly uphinde wathi ngoLwesibili "akakaze ahambisane nezinkampani ezibophezela" igunya lokugoma, kepha wathi "i-oda eliphezulu elivela kuMongameli Biden ligunyaza ukuthi bonke abasebenzi bakahulumeni" kanye "nabo bonke osonkontileka bakahulumeni" - ngokombono wakhe, zonke izindiza ezinkulu ”- kufanele zisebenzise ukugoma okuyimpoqo ngoDisemba 8.
Ngokufunga ngokuqhubeka negunya layo lokugoma, noma kunjalo, iSouthwest Airlines ibonakala yeqa umyalo ophethe okhishwe ngu UMbusi waseTexas uGreg Abbott ngoMsombuluko enqabela izinkampani ezizimele ukuthi zidinge ukugonyelwa kwabasebenzi i-COVID-19.
I-Southwest Airlines izinze eDallas, eTexas, ngakho-ke ingabhekana nempendulo enzima yokweqa i-oda lesifundazwe.
Isoftware namathuluzi aku-inthanethi wokuhamba ...
Ukushushumbiswa kwabantu wubugebengu bomhlaba wonke
Uhlu Lwezincwadi Eziphezulu Ezishukumisayo Zokukusiza Ukhule